Sourcing - Misidhari
Kune makambani akawanda ekutsvaga.Sei CEDARS?
➢ Ita bhizinesi nekuvimbika
➢ Kuzadzikisa maitiro ekutsvaga
➢ Cedars mutengesi network: 200+ vatengesi vezvitoro, mazana matatu mafekitori
➢ Intelligence data rutsigiro
➢14+ makore echiitiko mukutsvaga mabasa
➢ Shasha yevashandi vane avhareji yemakore gumi nematanhatu
➢Nyatsotevedzera SGS ISO 9001 kunaka manejimendi
Misidhari process control
Wholesale: Mutengi-Mutengesi Hukama
Sourcing Agent: Pamusoro pechido chemutengi;100% pachena kutaurirana maitiro uye mutengo.
Chikamu Main Basa Wholesale Sourcing
Agent Pfungwa Huru
Demand Evaluation Tauriranai uye simbisai zvinodikanwa √ √ * Yakatemerwa ma paramita, huwandu, mutengo wakananga, kudhirowa, nezvimwe
Demand Matching Cedars Supplier Network (200+ vatengesi, 300+ mafekitori) √ √ * Supplier sosi: indasitiri dhatabhesi, kuratidzwa
* Supplier kusarudzwa maitiro: ISO 9001 certification;Zvakafanana pakukosha.
Gadzira vatengesi vatsva
-Anogona kugovera rondedzero
-Supplier kurudziro √
Supplier Management Mutsva wemibvunzo yemugovera;Qualification verification √ √ * Simbisa hunhu kuburikidza nehurumende, mawebhusaiti, social media, nyanzvi nezvimwe.
* Ongorora zvinoenderana nechigadzirwa & sevhisi mhando, kukwikwidza kwemutengo, pa-nguva kuendesa nezvimwe.
* Vatatu-tier mutengesi (A: Inofarirwa; B: Inokodzera; C: Imwe nzira)
Kushanya nguva dzose √ √
Kuongorora kwegore √ √
Ongororo yegore negore yekugutsikana √ √
Commercial Negotiation Simbisa mashoko √ √ * Kukwidziridza mitengo kuburikidza nepamba uye kunze e-commerce mapuratifomu
* Win-win-win-win zano mukutaurirana maitiro
Saina chibvumirano chemumiriri wekutsvaga uye chibvumirano chekuvanzika. √
Saina chibvumirano (kurongedza / waranti / mamwe mazwi) √ √
Fee Mutengo weagent (fixed rate) √
Mari yerwendo rwebhizinesi (kana zvichibvira) √
Order Processing Simbisa sampuli (kana zvichibvira) √ √ * Chengetedza muenzaniso wekuenzanisa
Unganidza zvinhu √ √
Nguva dzose mhinduro √ √
Kuongororwa kwemaitiro ekugadzira (kana zvichibvira) √
QC Ita shuwa kuti chigadzirwa chinopihwa zvinoenderana nekontrakiti.(Zvakafanana nemasampuli) √ √ * Lable, kurongedza, kutora mafoto
* Dzivisa kukanganisa
Ongorora accoding kune Cedars zviyero / zvinodiwa nemutengi √ √
Chirevo chekuongorora √
Logistics Forwarder development √ *Onesa kutakura uye nguva
* Vhidhiyo yekurekodha yeCLS
* Rekesa mushure mekurodha
Warranty 12 Mwedzi waranti yezvikamu zvepakutanga;Mwedzi mitanhatu yezvikamu zvemashure. √ Zvichienderana ne "Cedars Warranty Policy"
120% FOB muripo √
Mutengesi anopa waranti √
Misidhari inobatsira mukukurukurirana nevatengesi √
Misidhari inogovera kurasikirwa mumamiriro ezvinhu chaiwo √
Aftersales Service 24 maawa mhinduro √ √
0.1% FOB muripo wekunonoka pazuva √
5 mazuva ekushanda ekukumbira √
Batsira mukukurukurirana nevashambadziri √
Yakavambwa muna 2007, Misidhari yakave yakakosha muzvikamu zvemotokari zvekutsvagisa masevhisi anosanganisira Hyundai & Kia zvikamu, Ford Transit zvikamu, masipire eChery, Geely, Lifan, Great Wall nezvimwewo, kune vatengi vanobva kunyika dzinopfuura makumi matanhatu.
Pamwe 14+makore eruzivo mubhizinesi rekutsvagisa, ruzivo rwemusika wemuno uye kuve netiweki yakakura yevatengesi muChina, tinogona kukubatsira kusarudza vatengesi vakakodzera, kutaurirana mitengo, kugadzirira nekugadzirisa mapepa, kuitisa kuongororwa kwemhando, kuronga kutumira kwenyika uye zvinhu, uye kupa. chero rubatsiro rwekupedzisira runodiwa sezvo kutumira kwako kunosvika.Nhanho imwe neimwe yehurongwa hwese iri pachena.
CEDARS ine rekodhi rekodhi rekodhi yekuunza / kutumira kunze mitsara yemagungano emotokari nemimwe michina mikuru.
Misidhari inokwanisa kupa zvirinani RORO mwero kune vatengi vedu nekubatanidza akasiyana mavhoriyamu etsika pamwechete.
Mune zvimwe zviitiko, kuchengetedza kwekutakura kwakaitwa neCedars kune vatengi vayo kunoreva 1% -2% yekuderedzwa kweFOB.
Misidhari inotora chete 30% yezvekuchengetwa kwekutakura sekomisheni yegore rekutanga.
Semuyenzaniso, ngatitii mutengi ari kubhadhara USD1,000,000 zvekutakura gore negore, kana zvinhu zvitsva zveCedar zvawanikwa kune mutengi iri USD900,000 pagore, komisheni yeMisidhari inongove USD30,000 (kana 30% yegore rekutanga mari yekuchengetedza) .
7 Zvikonzero Zvekusarudza Misidhari PDI (Pre-Delivery Inspection)?
● Dzivisa motokari dzine dambudziko kubva kune mutengesi;
● Usatambisa mari kugadzirisa motokari itsva paunosvika;
● Batsira kugadzira hurongwa hwekutonga huri nani kune mutengesi;
● Kuchengetedza mari yekutumira vanhu vakabatikana kuti vaende kuChina kunoongororwa chete;
● Kukurukurirana kuri nani pakati pevaChinese munzvimbo yenguva yeChinese;
● ISO9001 yakasimbiswa;
● Makore masere mubhizimisi remotokari;
Matemu akanaka (*)
PDI report ichatumirwa zuva nezuva;
300% chirango (mutengo pamotokari) ichashandiswa pakukanganisa
* (Kana iyo PDI chirevo chakasiyana nemotokari chaiyo; Mari yechirango haigone kudarika huwandu hwese hwekutakura)
* Mushure mezuva pabhodhi
Shock Absorber Mota, Zvikamu zveMota yeHyundai, Auto Zvikamu ZveKia, Auto Parts Sourcing, Chery Qq Zvikamu, Ford Transit Zvikamu Zviri Kutengeswa,